Wacal Daray ah: Agaasimaha Guud ee Radio Daljir oo isku day dil ka badbaaday – Radio Daljir
Diseenbar 9, 2018 12:03 g 0
Agaasimaha guud ee Radio Daljir Axmed Shiikh Maxamed (Tallman) ayaa ka badbaaday isku day dil kaddib markii rasaas uu ku weeraray askari kamid ah bilayska Puntland ee magaalada Bossaso.
Marka magaca ama amarka masuuliyiinta lagu gaaro go’aan in la jaro ama halis la geliyo nafta muwaadin Puntland loona ordayo kursiga ugu sareeya dalka, maxaa dalka iyo dadka u danbayn doona?
Maamulka Radio Daljir waxa uu u qaatay in tani ay ahayd farriin cad oo muujinaysa hadafka shaqsiyaadka raba in ay hoggaamiyaan dadka iyo deegaanka Puntland.
Musharrax Asad Cismaan Cabdullaahi Diyaano, Taliyihii hore ee Ciidamadda Ammaanka Puntland ee PSF (Puntland Security Force), haddana ah musharrax Madaxweyne Puntland ayaa Radio Daljir horay farta ugu fiican musuqa baahsan ee lagu tuhmayo iyo waliba dhammaan maamulkii PSF iyo taliyayaashii oo uu ku soo koobay qaraabadiisa hoose.
Musharrax Asad Diyaano oo xilkii Taliyaha PSF ka degay, horayna uga dhaxlay aabbihiis Cismaan Cabdullaahi Diyaano ayaa xilkii taliyenimo ee ciidanka PSF hadda ku wareejiyey walaalkiis Maxamuud Cismaan Cabdullaahi. Musharrax Diyaano iyo xafiiskiisa xiriirka bulshada ayaa dhammaantood ka gaabsaday in ay ka jawaabaan su’aalaha Radio Daljir ee musuqa hareereeyey ciidamada PSF iyo waliba ammaanka Bossaso oo faraha ka sii baxaya.
Daljir kala soco warar dheeraad ah oo ku saabsan isku dayga dil ee Agaasime Tallman.
Wararkii hore ee Musharrax Asad Cismaan Cabdullaahi Diyaano
Siyaasadda & Dhaqaalaha 406 Wararka 13420